ISamithi yeG20 eRome: Ivala inkomfa yabezindaba ngomhla wama-31 kuOkthobha 2021 eyayibanjelwe eNuvola.
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » ISamithi yeG20 eRome: Ivala inkomfa yabezindaba ngomhla wama-31 kuOkthobha 2021 eyayibanjelwe eNuvola.
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • abantu • komzila Ngoku
I-G20 eRoma isandula ukuphela ngenkomfa yabezindaba. eTurboNews Umbhaleli wase-Itali uMario Masciullo wayekho. Phakathi kwemixholo ephambili yemisebenzi, ngaphandle kobhubhani kunye nogonyo, yayiyingxaki yemozulu, ukuchacha kwezoqoqosho, kunye nemeko yase-Afghanistan.
Ingqungquthela yoonondaba yeG20 eRoma yokuvala ngomhla wama-31 kweyeDwarha ngowama-2021 yayibanjelwe eNuvola.
Inkulumbuso yase-Italiya, uMario Draghi, uvule i-G20, ngethemba lomanyano lwenjongo yokulwa nobhubhane.
Le ngqungquthela ibibanjwe okokuqala e-Italy.
KuFrancesco Tufarelli, uMongameli wenethiwekhi "ye-Europolitica", uthe "kubalulekile ukubuyisela umntu kwindawo yezopolitiko nezoqoqosho."
U-PM Draghi uthe: "Ngamana umhlaba ungahamba kunye ukuphumelela kumlo ochasene nobhubhane."
Ukuvalwa kweNgqungquthela yeG20 eRome nabezindaba yiNkulumbuso uMario Draghi
I-G20, isivumelwano phakathi kwe-US kunye ne-EU yokususwa kwemisebenzi kwintsimbi kunye ne-aluminium. UDraghi: "Inyathelo lokuqala lokuvuleleka kwezorhwebo."
I-G20, malunga nesivumelwano esisezantsi malunga nemozulu: isilingi ye-1.5 degrees yobushushu behlabathi kodwa isalathiso esingacacanga sokukhupha izinto ezikhutshwayo "phakathi kwinkulungwane"
I-G20, UDraghi uthi: “Siwagcwalise ngokunzulu amazwi. Ngokuthe ngcembe siza kufikelela ku-2050 njengosuku lokukhutshwa kwe-zero. ”
“Kule ngqungquthela, siye saqinisekisa ukuba amaphupha ethu asaphila kodwa ngoku kufuneka siqinisekise ukuba siyawajika abe yinyani,” itshilo iNkulumbuso kwinkomfa noonondaba. “Ekugqibeleni, kukho isithembiso sokunika i-100 lamawaka ezigidi ngonyaka kumazwe ahlwempuzekileyo.” Kwaye emva koko wabhengeza ukuba i-Italiya iya kuphinda kathathu ukuzibophelela kwayo kwezemali kwi-1.4 yezigidigidi ngonyaka kule minyaka mi-5 izayo kwingxowa-mali yemozulu eluhlaza.
Emva koko iNkulumbuso yaya kwingcombolo yeziphumo ezifunyenweyo, icacisa ukuba “sizibophelele ngezibonelelo ezininzi; sizigcinile ezi zibophelelo, kwaye siye saqinisekisa ukuba amaphupha ethu asaphila kwaye enza inkqubela. Siza kugwetywa ngento esiyenzayo, hayi ngento esiyithethayo,” ephinda amazwi eenkokeli ezininzi. Kwaye emva koko wathembisa: "Siyazingca" ngeziphumo ezifunyenwe kwi-G20 kodwa "esi sisiqalo nje."
I-G20, Draghi: "I-100 leebhiliyoni ezivela kwi-G20 kumazwe ahluphekayo kwimozulu."
"I-G20 ibe yimpumelelo," yatsho iNkulumbuso, uMario Draghi, othathe isigqibo sokuvavanya ingqungquthela esandul 'ukuphela eRoma malunga nonxunguphalo lwemozulu. Uthi, ingqungquthela eye yazisa iingenelo ezininzi, nokuba “kwakungelula.” Phakathi kwezi, i-PM ikhankanya uhlaziyo lwerhafu yamazwe ngamazwe "esizama ukuyenza iminyaka ngaphandle kwempumelelo," umda we-1.5 C ° womyinge wokufudumala kwehlabathi "ophucula izivumelwano zaseParis," ukongeza "ekuziseni amazwe athile. ukuthandabuza izikhundla eziqhelekileyo kwi-decarbonization," ngokubhekiselele eRashiya kwaye, ngaphezu kwayo yonke, i-China.
Impumelelo yokuqala eyachazwa nguDraghi ngowona mda uphezulu wokunyuka kwamaqondo obushushu ehlabathi, abekwe kwi-1.5 C °: “Ngokwemozulu, okokuqala, amazwe e-G20 azibophelele ekufikeleleni kwinjongo yokuqulatha ukufudumala okungaphantsi. Izidanga ze-1.5 ezinentshukumo ekhawulezileyo kunye nezibophelelo zexesha eliphakathi,” utshilo kwinkomfa yakhe yokugqibela noonondaba. Yongeza ngelithi “inkxaso-mali kawonke-wonke” yokwakhiwa kwemizi-mveliso emitsha yamalahle “ayiyi ngaphaya kokuphela kwalo nyaka.”
Umba wokukhutshwa kwe-zero kunye nokuchasana okuboniswe yi-China kunye neRashiya, engazange ivume umhla wokugqibela we-2050, iveza injongo kwiminyaka elishumi ezayo (2060). Umxholo oyintloko wemibuzo evezwe yintatheli kwiNkulumbuso uDraghi, nangona kunjalo, kuthiwa uyaneliseka, aze abonise ukumangala ngokuvuleka, (ngokutsho kwakhe), kuboniswe ngoorhulumente ababini.
“Ukususela eTshayina kude kube kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendilindele isimo sengqondo esingqongqo; uDraghi wongezelela ngelithi, “iRashiya neTshayina ziye zabamkela ubungqina bezenzululwazi be-1.5 C°, nto leyo ebandakanya ukuzincama okukhulu, [yaye] akuyondlwan’ iyanetha ukwenza oko. gcina. I-China ivelisa i-50% yentsimbi yehlabathi; izityalo ezininzi zibaleka phezu kwamalahle; lutshintsho olunzima.” Kwaye kumda we-2050, wongeze wathi: "Xa kuthelekiswa nemeko yangaphambili, ukuzibophelela kuncinci ngakumbi ukuya ku-2050 ngolwimi lweendaba. Ayichanekanga, kodwa ibingekho ngaphambili. Kubekho utshintsho ngolwimi olunika ithemba ngakumbi nakumazwe ebekade athi hayi.”
Kwaye esi sivumelwano sasinokwenzeka, wachaza, kuphela ngenxa yendlela esekelwe kwi-multilateralism ebandakanya onke amagunya akhoyo: "Kwi-G20 sabona amazwe asondela kwizikhundla zabanye ngolwimi oluchanekileyo," watsho.
“Ndiyambulela unozakuzaku uMattiolo nabo bonke abakwaSherpa ngomsebenzi abawenzileyo. Kukho into etshintshileyo kwi-G20, yokuba ngaphandle kwentsebenziswano, asiqhubeli phambili, kwaye intsebenziswano engcono kakhulu esiyaziyo yi-multilateralism, kunye nemithetho ebhalwe kwakudala kwaye isiqinisekise ukuchuma.
Imigaqo eza kutshintshwa kufuneka itshintshwe kunye.”
Kwaye unika umzekelo: "Ngokokuqala ngqa kuxwebhu lwe-G20, kumhlathi wama-30, sifumana isivakalisi esithetha ngeendlela zokumisela amaxabiso amalahle. Sihlaba ikhwelo kumacandelo ahlukeneyo e-G20 ukuba asebenze ngokuhambelana nezigunyaziso zawo ukuze afezekise ezi njongo kunye nokuxubana okufanelekileyo kuqoqosho olunokukhutshwa kwerhasi ephantsi ye-greenhouse ngokumisela ekujoliswe kuko kumazwe ahlwempuzekileyo. Ikhonkco eliye lavelisa utshintsho kukwazi ukuba nayiphi na inkqubela phambili xa kuthelekiswa nexesha elidlulileyo kunye nesithembiso soncedo oluvela kumazwe acebileyo anengqiqo. Lelinye lamatyala apho iTshayina neRussia zigqibe kwelokuba zitshintshe isimo sazo. ”
UDraghi, owayefuna ngamandla le ngqungquthela, wakhumbula kwakhona ukuzinikela okwenziwa kumazwe ahlwempuzekileyo kwihlabathi: "Sibeke iziseko zokubuyisela ngokulinganayo kwaye sifumene iindlela ezintsha zokuxhasa amazwe emhlabeni," uqukumbele u-PM Draghi.
UBiden: "Siza kufika kwiziphumo ezibonakalayo, enkosi e-Itali."
Ingqungquthela yeenkokeli ze-G20 eRoma ivelise iziphumo “ezibambekayo” kwimozulu, ubhubhani we-COVID-19, kunye noqoqosho. Umongameli wase-US uJoe Biden ukuthethile oku kwinkomfa yokugqibela yabezindaba, ngaphambi kokuba aye eGlasgow, kwi-COP26, kwaye wabulela ngokucacileyo i-Itali kunye neNkulumbuso uMario Draghi "ngomsebenzi omkhulu owenziweyo."
"Ndiyakholelwa ukuba senze inkqubela ebonakalayo, kwakhona sibulela ukuzimisela i-United States ikuzise etafileni" yeengxoxo. Le ngqungquthela "ibonise amandla eMelika xa izibandakanya kwaye isebenza namahlakani ethu kwimiba." UBiden emva koko wathi "akukho nto inokuthatha indawo yothethathethwano ubuso ngobuso ngentsebenziswano yehlabathi."
Imithi yetriliyoni etyalwe ngo-2030
"Ngokubona ukungxamiseka kokulwa nokuwohloka komhlaba kunye nokudala iisinki ezintsha zekhabhoni, sabelana nenjongo enqwenelekayo yokutyala ngokudibeneyo imithi eyi-1 yetriliyoni, sigxile kwezona zinto ziwohlokileyo emhlabeni." Oku kunokufundwa kwisibhengezo sokugqibela sengqungquthela yeG20 eRoma.
"Sikhuthaza amanye amazwe ukuba adibanise kunye ne-G20 ukufezekisa le njongo yehlabathi nge-2030, kubandakanywa neeprojekthi zemozulu, ngokubandakanyeka kwecandelo labucala kunye noluntu," ifundeka.
UJohnson: "Ukuba iGlasgow iyasilela, yonke into iyasilela."
"Ndiza kucaca, ukuba iGlasgow iyasilela, yonke into iyasilela." Inkulumbuso yase-Bhritane u-Boris Johnson ukuthethile oku ngokubhekiselele kwi-COP26 kwinkomfa yabezindaba ekupheleni kwe-G20 eRoma. "Senze inkqubela phambili kule G20, kodwa sisenendlela yokuhamba," wongeze watsho, "Asizange sithethe ixesha elide," waphawula malunga neDraghi-Erdogan yokunyibilika kwisandla sokuqala kwi-G20.
Inkcazo evela kwi-Huffington Post
Ukusuka kwi-G20 eRoma, besilindele iimpendulo ezingaphezulu kunye nezenzo ezibambekayo kumlo ochasene nengxaki yemozulu. Sidanile sisiVumelwano seMozulu esityikitywe namhlanje. Esi sisivumelwano esenza ngokusesikweni oko sele kufunyenwe kwixesha elidlulileyo, ngaphandle kokubonelela ngezibophelelo ezibambekayo kwimali yemozulu, ukuqala nge-Italiya engazange ibeke etafileni igalelo layo elifanelekileyo - ubuncinane i-3 yeebhiliyoni zee-euro ngonyaka - iphelele I-100 yeebhiliyoni zeedola ezathenjiswa kwiminyaka emi-6 eyadlulayo eParis njengesibophelelo esihlangeneyo samazwe ahambele phambili kwezoqoqosho ukunceda awona ahlwempuzekileyo kwintshukumo yemozulu. Ngamafutshane, kwi-Nuvola Rome, i-G20 ifumene amanzi ashushu ekulweni nengxaki yemozulu.
Ngoku ithemba lelokuba eGlasgow, apho iCOP26 ivula khona namhlanje, izikhulu zeplanethi ziya kukwazi ukufumana isivumelwano sokufikelela kwisivumelwano esitsha esinebhongo semozulu esikwaziyo ukugcina iqondo le-1.5° C liphila kwiSivumelwano saseParis esisayinwe kwi-2015, kodwa kwakhona ukukhawulezisa ukuziqhelanisa nokutshintsha kwemozulu, ukumelana nelahleko kunye nomonakalo woluntu oluchaphazeleka kakhulu yimeko yonxunguphalo, kodwa kananjalo kwaye ngaphezu kwako konke ukuxhasa ngemali ngokufanelekileyo isenzo samazwe ahlwempuzekileyo kunye nokugqibezela iRulebook, oko kukuthi, ukuphunyezwa kwemithetho yesiVumelwano, ukuze ekugqibeleni yenza ukuba isebenze.
Isivumelwano sorhwebo kunye ne-Afghanistan.
I-Turkey yazisa i-biography njengesipho sokusayina uxolo.